Nei Apple ichishandisa ndangariro dzeChinese mumidziyo yayo kutengeswa muhofori yeAsia? | IPhone nhau
Aya makambani makuru emagetsi emagetsi anowanzoita mafambiro ari pamusoro pekunzwisisa kwedu. Zvinoenderana neruzivo rwechangobva kuitika, Iyo Cupertino kambani iri kutenga ndangariro kubva kuChinese vatengesi iyo yainozoisa mumidziyo yekutengesa chete muChina.
Zviri pachena kupfuura kuti hofori yekuAsia ine mutemo unopfuura unoshamisa zvese kumakambani anotengesa ipapo uye kune avo vanopa mamwe masevhisi. Kunyangwe isu tisinganyatso kujekesa zvingangodaro zvine chekuita nehurumende yeChinese mune izvi.
Ino nguva yaive iyo Nikkei ruzivo portal iyo yakagovana iyi ruzivo. Apple ichatanga kushandisa zvimwe zvekuchengetedza machipisi zvakagadzirwa muChina uye kubva kumakambani anogara munyika, asi nezve zvigadzirwa zvinotengeswa chete uye zvega muAsia hofori. Kune zvimwe zvigadzirwa zvese, zvinoita sekunge iyo femu ichaenderera ichishandisa avo vanowanzo kupa zvinhu, kufamba kunopukunyuka zvachose kunzwisisa kwedu, uye sezvatakataura, tinopokana kuti zvine chekuita here nekuteerera mitemo ye nyika, hurumende isingade zvachose kuti zvishandiso zveIOS hazvina mikova yekumashure.
Kune rumwe rutivi, iyo portal yenhau inoyambira kuti kufamba uku neApple kuri nekuda kwechokwadi chekuyedza kusiyanisa vagadziri vayo uye vanotengesa kuitira kuti isakundike mumusika chero upi zvawo nekuda kwekudonha kweimwe chigadzirwa nekuda kwekushaikwa kwekuwanikwa kwezvinhu zvakasvibirira nevamwe vevashandi vayo. Zvichakadaro, Apple iri kuramba ichinakidzwa neChina musika uko wakakura zvakanyanya uye wakaramba uri mumakore apfuura, zvakapesana nezviri kuitika kune dzimwe nzvimbo dzakaita seUnited States nenzvimbo zhinji dzeEurope.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Noticias » Nei Apple ichishandisa ndangariro dzeChinese mumidziyo yayo kutengeswa muhofori yeAsia?
Iyo HomePod inogona kusiya mamaki pane kumwe kumeso, kunyanya huni